Apple Products | IPhone News (Pejy 11)
Ny Apple Watch 2 dia hanana bateria 33% avo kokoa
Araka ny fivoahana iray, ny Apple Watch 2, izay havoaka amin'ny volana septambra, dia hanana bateria 33% lehibe kokoa noho ny Apple Watch amin'ny taranaka voalohany.
Kanex dia mitondra antsika ny tobim-pandefasana finday 4000mAh voalohany ho an'ny Apple Watch
Ireo tovolahy ao Kanex dia mandefa ny toby fiantohana voalohany voamarin'ny Apple mba hahafahantsika mameno ny Apple Watch hatramin'ny in-6 amin'ny fomba azo entina.
Spotify dia nandà ny fiampangana ny fanasaziana ireo ekena tsy eken'ny Apple Music
Na dia mandà ireo fiampangana azy aza i Spotify, dia ny fampiasana teknika tsy dia madio loatra hiadiana amin'ny Apple Music no nahatonga ilay resabe
Apple dia namoaka ny iOS 10 Beta 8 ary ny tvOS 10 Beta 7
Andro iray taorian'ny nanombohana ny iOS 9.3.5 hanamboarana bibikely fiarovana matotra izay namela azy ireo hitsikilo ny iPhone ...
PrintCentral Pro ho an'ny iPad maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Ny PrintCentral Pro dia mamela antsika hanonta karazana rakitra avy amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny Wi-Fi na mpanonta tsy misy tariby
Manome enim-bolana maimaim-poana amin'ny Apple Music i Deutsche Telekom
Ilay mpandraharaha alemanina Deutsche Telekom dia hanolotra Apple Music enim-bolana maimaimpoana ho an'ireo mpanjifa vaovao rehetra misoratra anarana amin'ny orinasa
Ireo mpanakanto izay ho ao amin'ny Apple Music Festival London dia efa fantatra
Herintaona indray dia hanao hetsika i Apple izay handray anjara amin'ny kaonseritra isan-karazany ny mpanakanto isan-karazany. Amin'ity taona ity dia hatao hoe Apple Music Festival izy io.
Mankalaza an'i Tim Cook mandritra ny dimy taona amin'ny maha CEO an'ny Apple azy miaraka amina tombony an-tapitrisany
Dimy taona izao ny andro nanendrena an'i Tim Cook ho CEO an'ny Apple. Cook dia manana bonus mihoatra ny $ 100 tapitrisa.
Apple Music dia manomboka mankarary loha amin'ny Spotify, izay te-handoa kely ny mpanakanto
Nilaza izy ireo fa tsia, saingy toa ny Apple Music no ho olana amin'ny Spotify, farafaharatsiny rehefa mifampiraharaha amin'ireo mpanakanto sy orinasan-tsoratra.
Foxconn dia nanambara ny fahafatesan'ny mpiasa roa tamin'ny herinandro lasa
Niverina tamin'ny vaovao indray i Foxconn taorian'ny fanekeny ny fahafatesan'ny mpiasan'ny orinasa roa ao Chine tamin'ny herinandro lasa teo.
Text 2 Group Pro maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana Text 2 Group Pro dia ahafahantsika mandefa hafatra sy mailaka ho an'ny vondrona haingana sy mora.
Apple mandray an'i Gliimpse
Apple dia nahazo ny startup Gliimpse, namboarina tao amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fahasalamana. Ity hetsika ity dia mametraka ...
Ny lalao 15 tsara indrindra ho an'ny Apple TV 4, 9 volana aorian'ny fandefasana
Ity ny lisitry ny lalao tsara indrindra ho an'ny Apple TV 4 mba hahafahanao mankafy ny fialamboly tsara indrindra avy amin'ny sofa ao amin'ny efitranonao.
Apple Nanambara 2016 Daty Festival Apple Apple Music
Vao nanambara ny datin'ny Apple Music Festival amin'ity taona ity ny orinasa monina ao Cupertino, izay manamarika ny 10 taona hatramin'ny voalohany
Nakaton'ny Samsung ny serivisy fandefasana mozika
Vao nanambara ny fanakatonana ny Milk service streaming an'ny orinasa Koreana ny Samsung tamin'ny 22 septambra
Apple Stores dia lasa mihoatra ny "Stores" fotsiny
Apple dia maniry ny fivarotany ho mihoatra ny fivarotana ary efa nanomboka nanala ny teny hoe "Store" amin'ny "Apple Store" ankehitriny.
Raha hampiasa ny Apple Watch tsy misy iPhone dia mbola hiandry herintaona ihany ianao
Iray tamin'ny fanirian'ny maro sy ny fitarainan'ny maro izany, saingy toa samy miala izy ireo amin'ny lafiny roa ...
Ny OneDrive dia nohavaozina manamboatra bug maro be
Vao avy nanavao ilay rindranasa i Microsoft mba hitantanana ireo rakitra ao amin'ny rahona OneDrive indray, manamboatra tsy fetezana maro
Lalao 3, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra, ho an'ireo ankizy kely ao an-trano
Androany izahay dia mampiseho lalao telo maimaimpoana ho an'ireo ankizy kely ao an-tranon'ilay mpanamboatra MarcoPolo, izay hianarin'ny zanakay momba ny toetrandro, ny ranomasina ary ny arctic
PDF Reader Premium maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Ny rindranasa PDF Reader Premium dia azo alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra, fampiharana izay manana vidiny 4,99 euro
Dallas sy San Antonio dia efa manana fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka
Ny tanàna farany izay efa manolotra fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka amin'ny alàlan'ny Apple Maps dia i Dallas sy San Antonio any Etazonia
Apple Pay dia mahatratra 37 ny banky amerikanina sy andrim-bola
Apple Pay dia mitohy manitatra manerana an'i Etazonia. Tao anatin'ny ora farany dia nahatratra 37 ny banky sy andrim-bola eto amin'ny firenena.
Ireo mpampiasa any Japon, Suisse ary Taiwan dia afaka mandoa ny vidin'ny iTunes amin'ny alàlan'ny faktioran-telefaona
Vao avy nanampy firenena vaovao telo i Apple, izay ahafahana mandoa vola amin'ny fividianana iTunes amin'ny alàlan'ny faktiora finday
Microsoft dia miatrika ny Surface sy iPad Pro amin'ny fanambarana farany nataony
Asehonay anao ity dokambarotra mahaliana avy amin'ny Microsoft ity izay nanaratsy endrika ny iPad Pro mba hahazoana varotra ho an'ny Surface Pro 4.
Tamin'ny voalohany i Apple dia nihevitra ny hametraka ireo sensor Apple Watch amin'ny fehy
Ny famolavolana Apple Watch tany am-boalohany dia nahitana «sensor» miorina amin'ny tadin'ilay fitaovana fa tsy ny eo ambany.
Ny efitrano Office ho an'ny iPhone izao dia mamela anao hanao sary na hanoratra fanamarihana
Vao avy nanavao ny rindranasan'ny Office i Microsoft ary nanampy fanohanana ny fanaovana sary ao anaty apps
Twitter miasa mba hitondra ny fampiharana ao amin'ny Apple TV
Twitter, lavitra ny manipy lamba famaohana, dia manohy manandrana manatsara ny fiasan'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fanatsarana fanatsarana vaovao toy ny hetsika fanatanjahantena amin'ny fampielezam-peo
Apple koa dia mandefa beta 6 an'ny watchOS 3, tvOS 10 ary macOS Sierra
Apple dia namoaka ny tvOS 10 beta 6 sy ny watchOS 3.0 beta 6, azo inoana fa manamboatra bibikely ary angamba hiara-hiasa amin'ny iOS 10.
USB Disk Pro maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana USB Disk Pro dia ahafahantsika mitantana ireo rakitra rehetra voatahiry ao amin'ireo serivisy rahona ampiasainay
DMD Panorama, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra atolotray anio dia ny DMD Panorama, fampiharana izay manome anay vondron'olona mpampiasa panoramic ihany koa
PrintCentral Pro ho an'ny iPhone maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Ny fampiharana PrintCentral Pro, izay azo alaina maimaimpoana, dia ahafahantsika manonta na aiza na aiza misy anay
Prague dia efa manana fampahalalana momba ny zotram-pitateram-bahoaka avy any Apple Maps
Ny tanàna eropeana farany izay efa manana vaovao momba ny fitateram-bahoaka dia Prague
Evolus, fenoy amin'ny fomba rehetra ny fitaovanao rehetra
Evolus dia manana izay ilainao rehetra handoavana ny fitaovanao rehetra ary koa ataovy amin'ny fomba mendrika azy ireo. Azo alaina amin'ny Kickstarter izao.
Apple dia tsy hanokatra ny chip NFC ho an'ny antoko fahatelo aorian'ny fangatahan'ny banky aostralianina
Apple dia nandefa valiny tamin'ny fangatahan'ny banky aostralianina te-hanokatra ny fampiasana ny chip NFC amin'ny antoko fahatelo
Ny fivarotana gilasy an'i Dr. Panda dia maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Indray mandeha ihany koa, ny mpandrindra Dr. Panda dia manolotra rindrambaiko iray hafa hampidina maimaim-poana: Fivarotana gilasy an'i Dr. Panda
Infuse Pro 4 dia havaozina manampy asa lehibe
Ny mpilalao horonantsary sy audio tsara indrindra ho an'ny iPad, Infuse Pro dia novaina tamin'ny alàlan'ny fampidirana fiasa vaovao sy mahaliana
YouTube dia manavao ny fampiharana azy io ary manala ny fanovana manelingelina ny volume rehefa milalao horonantsary
Ny serivisy vidéo an'ny Google, YouTube dia nanavao ny fampiharana dia nanova ny fomba fanehoana ny fiovaovan'ny haavon'ny horonan-tsary
Apple dia mandefa beta fahadimy amin'ny iOS 10. Misy kinova ampahibemaso sy betas vaovao an'ny macOS Sierra, tvOS ary watchOS 3
Nanaitra antsika indray izy. Apple dia namoaka betas vaovao ho an'ny iOS 10, tvOS 10, watchOS 3, ary macOS Sierra, ny fahadimy izay marina.
Manadihady mivarotra mpanamboatra fitaovana i Jawbone
Araka ny fanontana The Information, ilay mpanamboatra veteranera tamin'ny fehin-tànana nanisa dia mety nanantona ny marika For Sale
Google dia maneso ny iPhone 16 GB hampiroborobo ny Google Photos
Google dia nandefa doka vaovao mitsikera ny maodely 16GB hampiroborobo ny Google Photos
Splot dia lalao an-tsehatra iray izay vahiny lehibe mampihomehy izay tsy maintsy mamoaka ireo zazakely Chicks amin'ny fandrahonana
Forvo pronunciation maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Ny rindranasa maimaim-poana atolotray anao anio dia antsoina hoe Forvo, fampiharana izay hanampy anay hahay hiteny amin'ny fiteny hafa.
KGI: Ho tonga amin'ity taona ity ny Apple Watch 2 miaraka amin'ny GPS sy ny barometre
Araka ny voalazan'i Ming Chi Kuo, Apple dia handefa ny Apple Watch 2 miaraka amin'ny GPS sy ny barometre amin'ity taona ity miaraka amin'ny maodely nohavaozina ho an'ny taranaka voalohany.
Ahoana ny fampidinana Brushstroke maimaim-poana
Ilay rindranasa asehonay anao anio fa ampidininao maimaimpoana dia antsoina hoe Brushstroke ary manana vidiny 4,99 euro ao amin'ny App Store
Tonga any Korea Atsimo ny Apple Music
Korea atsimo no firenena farany ahafahan'ny mpampiasa mankafy ny serivisy mozika mivantana an'i Apple, aorian'ny Israel
Ny kitendry Google, Gboard, dia nohavaozina ary efa amin'ny Espaniolo ankoatry ny fiteny hafa
Google dia vao namoaka ny fanavaozana voalohany ny fitendry Gboard izay mampifanaraka azy amin'ny Espaniôla ho fanampin'ny fiteny hafa.
ProCam 3 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Rehefa matetika mampiasa ny iPhone ho fakana sary sy handraisana horonantsary dia amin'ny vakansy ary na dia ...
Ny rakikiran'i Britney Spears ho avy Glory izay halefa manokana amin'ny Apple Music
Mpanakanto maro kokoa no mirotsaka amin'ny exclusivity ao amin'ny Apple Music. Ny farany dia i Britney Spears, izay ny Glory dia halefa amin'ny serivisy Apple ihany.
Apple dia efa nandoa $ 50.000 miliara ho an'ny mpamorona
Efa fantatsika ny antony itiavan'ny mpandrindra ny App Store: Apple dia efa nandoa maherin'ny $ 50.000 miliara ho an'ny mpamorona.
Telegram dia nohavaozina manampy asa vaovao
Ny rindranasan-kafatra hafatra Telegram dia nahazo fanavaozam-baovao vaovao manampy asa vaovao mifandraika amin'ny sticker
Araho ny Lalao Olaimpika 2016 any Brazil miaraka amin'ny fampiharana RTVE
Noho ny fampiharana RTVE dia afaka manaraka izay rehetra mitranga amin'ny Lalao Olaimpika any Brezila avy amin'ny fitaovantsika izahay.
Ny Tale Jeneralin'ny Time Warner dia nilaza fa tsy dia matotra tokoa amin'ny fividianana ny orinasany i Apple
Ny lehiben'ny Time Warner dia manamafy amin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Bloomberg fa tsy nikasa ny hividy ilay orinasa velively i Apple
Ny Instagram dia havaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny asan'ny Instagram Stories
Vao nohavaozina ny tambajotra sosialy sary tamin'ny alàlan'ny fampidirana fiasa vaovao, Instagram Stories, mitovy amin'ny Facebook
Apple Music dia mipaka any Israel
Ny serivisy mozika streaming Apple Apple Music dia tonga tany Israel, herintaona mahery taorian'ny nanombohany.
Apple TV Remote, ny fampiharana Apple vaovao ho an'ny iPad sy iPhone
Apple TV Remote for the iPad and iPhone, dia ampiasaina hifehezana ny taranaka fahefatra amin'ny Apple TV, miaraka amin'ireo maodelin'ny Apple TV.
HYPELIGHT amidy mandritra ny fotoana voafetra
Ny fahavaratra dia iray amin'ireo vanim-potoana izay matetika ataontsika sary amin'ny fialantsasatra ary ny HYPELIGHT dia mety aminy.
Fantastical 2 ho an'ny iPhone amidy mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana tsara hitantanana ny kalandrie, Fantastical 2, dia amidy amina fotoana voafetra.
Ahoana ny fikajiana ny haben'ny zavatra amin'ny fakantsary iPhone
Misaotra ny fampiharana VisualRuler afaka mampiasa ny fakantsary misy ny iPhone handrefesana zavatra misy sary tsotra izahay
Misy izao ny fampiharana Apple TV Remote vaovao, Siri Remote amin'ny iPhone-nao
Nahita endri-javatra sasany tao amin'ny Remote ve ianao tamin'ny nampiasana azy tamin'ny Apple TV 4? Ny fampiharana Apple TV Remote dia efa misy izao.
iTunes 12.4.3 tonga hanamboatra olana amin'ireo lisitry ny iOS
Taorian'ny beta fahefatra an'ny iOS 10, Apple dia namoaka fanavaozana ny iTunes. iTunes 12.4.3 tonga hanamboatra olana amin'ireo lisitry ny iOS.
Betas ho an'ny rehetra: eto ihany koa ny beta 4 an'ny macOS Sierra, tvOS 10 ary ny watchOS 3
Mandritra ny beta fahefatra an'ny iOS 10, Apple dia namoaka beta 4 an'ny tvOS 10.0, watchOS 3.0 ary macOS Sierra 10.12 ho an'ny mpamorona.
Cosmos Rings, RPG ho an'ny Apple Watch, efa misy izao
Araka ny nampanantenaina, efa namoaka ny lalao RPG manokana voalohany ho an'ny Apple Watch i Square Enix. Ny anarany dia Cosmos Rings. Halahelo azy ve ianao?
ETO MAPS dia izao ETO WeGo
Ny fampiharana HERE Maps izay avy tany Nokia taloha, ary an'ny Mercedes, Audi ary BMW izao dia manova ny anarany hoe HERE WeGo
Tsaho: Apple Watch 2 dia hanana efijery manify kokoa, fa hitazona ny endrika
Araka ny tsaho farany, ny Apple Watch 2 dia hampiasa teknolojia hafa eo amin'ny efijery ahafahana manify kokoa, fa ny endriny ankapobeny kosa dia hijanona.
Fampiharana 12 hamoronana sy hizarana GIF amin'ny iPhone
Nandritra ny fotoana fohy izao, ny fisie GIF dia nanjary mpisolo toerana mety indrindra amin'ny fanehoana ny fihetsem-pontsika ...
Pegatron dia manomboka mampiasa robot amin'ny toerana iasany
Ny fampiharana robot amin'ny ozinina izay mivory fitaovana Apple no filaharan'ny andro. Pegatron no farany nanao izany.
Mistery Brighstone: Ny Hotel Paranormal maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Brighstone Mystery: The Paranormal Hotel dia traikefa an-tsary avy amin'ilay mpanamboatra fanta-daza G5, izay afaka sintomina malalaka izao.
Viber dia havaozina mamela anao hizara, hijery, hamafa ary hamerina amin'ny laoniny ny sticker
Ny sehatra fandefasan-kafatra japoney be mpampiasa indrindra any Moyen Orient, izay vao nohavaozina mamela ny fizarana sticker.
Microsoft Pix, mamela antsika haka sary amin'ny iPhone amin'ny fomba saika matihanina
Ireo tovolahy avy any Redmond dia nandefa fampiharana vaovao haka sary amin'ny fomba saika matihanina amin'ny fitaovantsika.
Units Plus Converter maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana Units Plus Converter, izay azontsika alaina maimaimpoana, dia ahafahantsika miova eo anelanelan'ny vola, lanja, halavirana, hafainganam-pandeha, mari-pana
Manohana an'i AMP izao ny browser Chrome ho an'ny iOS
Chrome dia lasa, saika hatramin'ny nanombohany ny kinova desktop, iray amin'ireo mpitety tranonkala tsara indrindra izay ...
Firefox for iOS izao dia haingana kokoa ary mandany bateria kely kokoa
Mozilla dia vao avy namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny mpitety Firefox izay hanatsarana ny fahombiazana sy ny fanjifana bateria.
Araka ny rojo famatsiana dia ho tonga aorian'ny fahavaratra ny Apple Watch 2
Toa efa hifarana ny fiandrasana ireo maniry ny Apple Watch 2: nilaza ny tsipika fivoriambe fa havoaka amin'ny volana septambra na oktobra.
Olona enina voasambotra tany Chicago satria nangalatra tamina magazay Apple maro
Alohan'ny hanombohan'ny iCloud sy ny fiarovana ahafahanao manakana tanteraka ireo fitaovana mifandraika amin'ny kaonty, ny…
Inona avy ireo fitaovana mifandraika amin'ny Apple ID?
Raha manana fanontaniana momba ny isan'ny fitaovana nampifandraisan'i Apple tamin'ny ID-nao ianao, dia hasehonay anao ny fomba hahalalanao azy haingana.
Apple dia nanofa 4000 metatra toradroa tany India mba hanafainganana ny fizotry ny famolavolana ny fampiharana
Apple dia efa nandray ny dingana voalohany hanofana ireo birao izay hametrahany ny mpandefa famolavolana fampiharana voalohany ao India.
Amin'izao fotoana izao ny iOS 9 dia hita amin'ny 86% amin'ireo fitaovana tohanan'ny
Tsy niresaka momba ny quota an'ny iOS 9 izahay amin'ny fitaovana mifanentana mandritra ny fotoana kelikely, satria efa ...
Guild of Dungeoneering, RPG vaovao tonga amin'ny App Store
Guild of Dungeoneering dia RPG mifototra amin'ny fihodinana izay tsy tokony hifehezana ny maherifo tsy maintsy aorintsika ...
RadioApp dia fampiharana ho an'ny iPhone tsara izay mamela antsika hihaino ny radio avy amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny Internet toa ny hoe radio mahazatra
Ahoana ny fomba hahitana tranga iPad tsara sy mora vidy
Ao amin'ny iPad News dia hanome torohevitra vitsivitsy izahay hahitanao fonony tsara sy tsara tarehy ary mora vidy ho an'ny iPad-nao.
Tady Apple Watch vaovao hankalazana ny Lalao Olaimpika
Apple dia nametaka fehin-kofehy nylon vaovao miaraka amin'ny sainan'ny firenena 14, izay azo vidiana ao amin'ny Apple Store any Brezila ihany.
Apple hanokatra Apple Store voalohany ao Brooklyn, New York
Amin'ny 30 Jolay, Apple dia mikasa ny hanokatra ny fivarotana voalohany ao amin'ny faritra Brooklyn ao New York.
Rayman Classic amidy mandritra ny fotoana voafetra
Ny developer Rayman Classic, Ubisoft, dia nampidina ny vidin'ity lalao ity ka hatramin'ny 0,99 euro avy amin'ny 4,99 euro izay vidiny matetika.
Square Enix dia miasa amin'ny RPG manokana ho an'ny Apple Watch
Azonao an-tsaina ve ny lalao RPG amin'ny Apple Watch? Izany no tian'ny Square Enix hatao, lalao filalaovana andraikitra manokana ho an'ny Apple Watch.
Facebook Messenger nihoatra ny iray tapitrisa tapitrisa isam-bolana mpampiasa mavitrika
Vao avy nanambara i Facebook fa ny sehatra fandefasan-kafatra faharoa, Messenger dia nihoatra ny 1.000 miliara isam-bolana mpampiasa mavitrika.
Mitohy amin'ny hafainganam-pandeha ny varotra Apple Watch
Ny orinasa farany namoaka ny tombam-bidin'ny fivarotana Apple Watch, UBS, dia nilaza fa mitohy amin'ny hafainganam-pandeha tsara ny varotra.
Apple Pay dia misy any Hong Kong izao
24 ora taorian'ny nanambarana ny fahatongavan'ny Apple Pay any Frantsa, Apple dia nanambara ihany koa ny fahatongavany any Hong Kong.
Nintendo dia mahatratra an'i Sony amin'ny kapitalin'ny tsena noho ny Pokémon GO
Ny vaovao farany mifandraika amin'ny Nintendo dia mampiseho amintsika fa ny sandan'ny orinasa Japoney dia nihoatra ny an'ny Sony misy firenena maro
Apple Stores dia mampiroborobo ny Apple Pay amin'ny fanomezana karatra iTunes $ 5
Apple dia te hamporisika ny fampiasana Apple Pay, manomboka amin'ny Apple Stores ary manome karatra fanomezana $ 5 any Etazonia sy UK.
Super Arc Light misy maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Manolotra anao indray izahay lalao izay azo alaina maimaim-poana tanteraka. Androany isika dia miresaka momba ny Super Arc Light
Pixelmator dia havaozina ho an'ny iOS miaraka amina fitaovana fifantina mahery
Pixelmator dia havaozina ao amin'ny iOS mankany amin'ny kinova 2.3, miaraka amin'ireo fitaovana fisafidianana farany indrindra ao amin'ny fampiharana Mac ho an'ny fitaovana iOS.
Apple Pay dia misy any France izao
Ny firenena farany nilatsahan'ny Apple Pay dia i Frantsa, telo herinandro taorian'ny nahatongavany tany Suisse.
iTunes 12.4.2 tonga mba hamaha olana amin'ny famerenana sasany
Taorian'ny fandefasana kinova vaovao an'ny rafitra fiasan'i Apple, namoaka ny iTunes 12.4.2 ihany koa ireo an'ny Cupertino.
Galaxy of Trian maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Androany dia inferinay ny lalao vaovao azontsika sintonina maimaimpoana ao amin'ny App Store: Galaxy of Trian, izay mazàna no vidiana amin'ny 4,99 euro
Apple mandefa beta fahatelo an'ny iOS 10, tvOS 10 ary watchOS 3
Ny tolakandron'ny betas vaovao: Apple dia namoaka ny beta fahatelo an'ny iOS 10.0, tvOS 10.0, watchOS 3.0 ary ny macOS, macOS Sierra voalohany.
Katy Perry dia namoaka "Rise" tokana ho an'ny Apple Music sy iTunes
Ilay hira Rise nataon'i Katy Perry, izay ho anisan'ny feon-kira amin'ny Lalao Olaimpika any Brezila dia azo jerena ao amin'ny iTunes sy Apple Music
Google dia manavao ny Hangouts indray mamela ny fanilihana ireo mpandray anjara amin'ny vondrona
Ny rindranasan'i Google fandefasan-kafatra, Hangouts dia nohavaozina izay mamela ireo mpampiasa hanilika amin'ny vondrona efa noforonina
App famindrana sary maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny App Transfer Photo, misy maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra, dia mamela antsika misintona sary avy amin'ny iPhone mankany amin'ny PC
Azo alaina maimaimpoana ny Scan & Translate
Ny Scan & Translate dia fampiharana iray ahafahantsika mamadika sary ho lasa lahatsoratra ankoatry ny fanaovana fandikan-teny ho amin'ny fiteny 90 mahery
Fanavaozana ny Google Photos vaovao miaraka amina endrika sy fanatsarana vaovao
Ny rindran-tsary Google Photos dia nahazo fanavaozana vaovao izay ahafahanao manangona ny sary mivantana nefa tsy mila misintona ny fampiharana.
WatchOS 3 dia misy fiasa vaovao amin'ny fiantsoana vonjy maika
Ny fahatongavan'i watchOS 3 dia hitondra antsika fiasa vaovao hahafahantsika miantso ny efitrano fitsaboana na manolotra angon-drakitra ara-pitsaboana avy amin'ny Apple Watch
Nohavaozina ny Facebook Messenger ary manampy fanohanana an'i Peek & Pop
Vao avy nanavao ny fampiharana Messenger ny Facebook nanampy fanampiana feno ho an'ny teknolojia 3D Touch izay niaraka tamin'ny iOS 9
Hanana departemanta hanamboarana iPhone ny magazay Apple Rosiana
Ny Apple Stores any Russia dia tsy manana serivisy manokana hamahana ireo tranga misy amin'ny iPhones tsy misy fiantohana.
DataMan Manaraka maimaimpoana amin'ny fotoana voafetra
Ny rindranasa asehonay anao anio DataMan Next dia mamela anay hifehy ny taham-pahalalanay finday amin'ny fotoana rehetra.
Ny Apple Watch no smartwatch izay manome fahafaham-po indrindra
Raha ny fanadihadiana natao vao haingana nataon'ny orinasa JD Power dia ny Apple Watch no smartwatch izay manome fahafaham-po ny mpampiasa indrindra.
Facebook Messenger dia hanampy resaka miafina hanatsarana ny fiainana manokana
Aleo tara toy izay tsy mbola nisy. Ary farany, ny Facebook dia hanomboka hanafina ireo resaka nifanaovanay tamin'ny alàlan'ny Messenger
Noteren'i Apple handoa 25 tapitrisa dolara ny fampiasana patanty
Ny fitoriana farany nafoin'i Apple dia mifandraika amin'ny fampiasana ny rafitra fitehirizana Apple ao amin'ny Time Machine
Maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra i Cross DJ Pro
Ny rindranasa atolotray anao anio hisintomana maimaimpoana dia antsoina hoe Cross DJ Pro ary ahafahantsika mampifangaro hira toa ny matihanina
Tady nylon ho an'ny Apple Watch latsaky ny 20 €
Tady izay maka tahaka tsara ny tadin'i Nylon vita amin'ny kofehy Apple dia mety ho anao amin'ny ampahatelon'ny vidin'ny tany am-boalohany.
Apple dia enjehina noho ny fampiasana carousel hanehoana ireo sary vokariny amin'ny tranonkala
Nitsangana androany ny orinasa monina ao Cupertino miaraka amin'ny fitoriana vaovao izay nilazany fa nanitsakitsaka ny patanton'ny carousel tao amin'ny tranokalany izy io.
Plugs an'izao tontolo izao, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny rindrambaiko World Plugs dia ahafahantsika mahita ao anatin'ny segondra vitsy ny karazana plug-n'ny firenena izay hotsidihintsika mba ho voaomana.
Apple Pay dia misy any Suisse izao
Ny firenena farany izay nandray an-tanana ny Apple Pay dia i Suisse, izay ananan'ireo banky telo lehibe ankehitriny manohana.
Remote Media Manager Pro maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana Remote Media Manager Pro dia mamela antsika roa hilalao horonantsary mivantana avy eo amin'ny toerana anaovana ilay rakitra ary hamindra ireo rakitra
Ahoana ny fomba hamohana Mac amin'ny Apple Watch
Izy io dia zava-baovao nasehon'i Apple tamin'ny fampisehoana farany an'ny macOS Sierra sy watchOs 3, ary efa misy izany ao amin'ny betas an'ny rafitra roa.
Apple dia namoaka ny tvOS 9.2.2 beta 5 sy OS X 10.11.6 beta 5
New Betas Afternoon: namoaka ny tvOS 9.2.2 beta 5 i Apple ary koa ny beta fahadimy an'ny OS X 10.11.6, ny kinova farany hatramin'ny nanombohan'ny macOS Sierra.
Manomana ny fandefasana Thinga.Me Microsoft hisambotra sy handamina zavatra tena izy
Ny rindranasa Thinga.Me an'ny Microsoft dia ahafahantsika mamorona fanangonana zavatra ary handamina izany amin'ny fomba tsotra sy tena ahazoana aina.
Voice Recorder Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny rindranasa asehonay anao anio ary azo sintonina maimaim-poana dia ny Voice Recorder Pro izay mandika sora-peo amin'ny lahatsoratra
Ny fampiharana Skype dia ahafahanao mandefa rakitra hatramin'ny 300 MB
Ny sehatra tsara indrindra mba hiantsoana telefaona erak'izao tontolo izao, Skype, ary koa izy no zokiny indrindra amin'ny ...
Apple dia mandefa ny beta faharoa amin'ny tvOS 10 sy watchOS 3.0
Apple dia namoaka ny beta faharoa amin'ny tvOS 10.0, watchOS 3.0, ary macOS Sierra 10.12. Tsy ho ela dia holazainay aminao ny vaovao rehetra.
Miverina amin'ny iOS 9 avy amin'ny iOS 10? Zavatra tokony ho ao an-tsaina
Azo atao ny mampihena ny iOS 10 ka hatramin'ny iOS 9 saingy misy antsipiriany lehibe vitsivitsy tokony ho fantatrao mba tsy hanenenanao any aoriana.
Procreate, havaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana fiasa vaovao marobe
Ny rindrambaiko Procreate dia nahazo fanavaozana lehibe miaraka amin'ny fiasa vaovao manan-danja sasany.
Ny MacBook Pro vaovao dia mety hampiditra sensor amin'ny tanan-tànana amin'ny bokotra herinaratra
Ny tsaho farany momba ny MacBook Pro vaovao dia mampiseho amintsika fa ny bokotra an-trano dia mety hanana sensor amin'ny dian-tànana
Ny fanavaozana farany ny Procreate dia feno fiasa vaovao
Ny vaovao farany farany an'ny Procreate dia feno vaovao, ambaranay aminao tanteraka amin'ny iPhone News izy rehetra.
Mandrosoa Center Pro amidy mandritra ny fotoana voafetra
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny fahavaratra, manome antsika fihenan'ny vidin'ny fampiharana ireo mpandraharaha
watchOS 3 amin'ny lalina: fandefasana indray ny Apple Watch
Apple dia nanolotra ny watchOS 3 ary amin'ny volana septambra ho avy izao dia hananantsika azy io izao. Fa ny beta voalohany kosa dia efa mamela tsiro tena tsara ao am-bava.
Apple dia misoratra anarana amin'ny "Night Shift" ho an'ny Mac, Apple Watch ary CarPlay
Efa ampiasainao amin'ny iOS izany, saingy hita fa nisoratra anarana "Night Shift" ho an'ny Mac, Apple Watch, ary CarPlay i Apple.
Nosakanan'i Brezila 6 tapitrisa dolara ny kaonty Facebook noho ny olana amin'ny WhatsApp
Ny olana WhatsApp farany any Brezila dia mampiseho amintsika ny fomba nanakanan'ny mpitsara iray tao amin'ny firenena 6 tapitrisa $ tamin'ny kaonty Facebook
Mamaly ireo fiampangana an'i Spotify i Apple
Apple dia mamaly ny fiampangana an'i Spotify ary manao izany amin'ny taratasy misokatra izay manazava tsara ny zavatra nefa tsy manaikitra ny lelany.
Facebook Messenger dia efa manana botte mihoatra ny 11.000
Ny botika dia toa lasa fepetra takiana amin'ny sehatra fandefasan-kafatra rehetra izay te hahomby amin'ny ...
Ny Facebook dia manala ny app Paper amin'ny App Store
Ny fahombiazana voafetra nananan'i Paper teo amin'ireo mpampiasa Facebook dia nanery ilay orinasa hisintona ilay fampiharana avy amin'ny App Store
Aiza ny Apple Pay any Espana?
Tonga tany amin'ny ekoatera ny taona 2016 izahay ary mbola tsy manana vaovao momba ny fotoana hahatongavan'ny Apple Pay any Espana. Fa maninona no tsy tonga any Espana ny rafitra fandoavam-bola amin'ny finday?
Haneho aloha ny lahatsoratry ny namantsika sy ny fianakaviantsika ny Facebook
Vao avy nanambara i Facebook fa afaka herinandro vitsivitsy dia hanova ny filaharana anehoana ireo zavatra vita an-tsoratra, manao laharam-pahamehana ireo an'ny namana sy ny fianakaviana
Ahoana ny fampidinana ny fampiharana Procreate maimaim-poana amin'ny app Apple Store
Ny rindranasa natolotry ny fampiharana Apple Store maimaimpoana ho antsika dia ny Procrerate, fampiharana sary nahazo loka nefa ho an'ny iPhone fa tsy iPad.
Google Translate dia nohavaozina tamin'ny fampidirana fiteny vaovao
Google Translate dia nohavaozina indray ary manampy fanohanana amin'ny fandikana fiteny bebe kokoa tsy misy fifandraisana Internet.
Apple dia namoaka ny beta fahefatra an'ny iOS 9.3.3, tvOS 9.2.2 ary OS X 10.11.6
Manohitra ny mety rehetra ary eo am-piandrasana ny iOS 10 faharoa, Apple dia namoaka ny beta fahefatra an'ny iOS 9.3.3, tvOS 9.2.2 ary OS X 10.11.6.
Play Builders maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Manolotra antsika ny fampiharana Toca Builders maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra ny mpandrindra Toca Boca, ary manana 2,99 euro ny vidiny mahazatra
Ity no ho fampiharana Remote manaraka ho an'ny Apple TV 4
Rehefa nandroso mialoha sy nandritra ny WWDC 2016 izy ireo, ny Apple TV dia hanana App Remote vaovao izay hiasa ho toy ny Siri Remote. Ho hitanao eto hoe hanao ahoana izany.
iOS 10 dia mamela antsika hanao laharam-pahamehana ny fisintomana ny rindranasa
Ny iOS 10 dia hamela antsika hametraka ho laharam-pahamehana ireo rindranasa izay tadiavinay halefa voalohany rehefa averinay indray ilay fitaovana
Amin'ny 26 Jolay, Apple hanambara ny valim-bola fahatelo amin'ny telovolana
Amin'ny 26 Jolay, ny orinasa monina ao Cupertino dia hanambara valim-bola amin'ny telovolana fahatelo amin'ny taona 2016
Maimaimpoana miafina mandritra ny fotoana voafetra ny zava-miafina miafina
Ny lalao asehontsika anio, Zava-miafina miafina amin'ny halaliny dia maimaim-poana misintona mandritra ny fotoana voafetra ary mety ho an'ny ankizy kely ao an-trano
Ny efijery MicroLED dia mety hahatratra ny taranaka fahatelo amin'ny Apple Watch
Ny taranaka fahatelo an'ny Apple Watch, dia hampiasa ny efijery microLED vaovao izay manome antsika fanjifana bateria henjana kokoa ary tsy matevina kokoa
Ekipa mpiara-manorina an'i Sage Bionetworks miaraka amin'i Apple hamolavola tetikasa fitsaboana vaovao
Mpanorina mpiara-manorina an'i Sage Bionetworks Apple vao nanakarama mpiara-miasa amin'ny ResearchKit sy Apple Watch Health Apps
Twitter dia hanampy sticker amin'ny herinandro ho avy
Ny vaovao farany izay hitondran'ny Twitter antsika ao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia ny mety hanampiana sticker amin'ny sary alefanay amin'ny tambajotra sosialy
BitTorrent Izao dia tsy ho ela ho an'ny iPhone, iPad ary Apple TV
Ny serivisy fampitana horonantsary BitTorrent Now dia efa ho tonga ao amin'ny App Store sy ny fivarotana fampiharana Apple TV
Wallpaper natolotry ny fampiharana Breathe avy amin'ny watchOS 3
Tianao ve ny fampiharana Breath ao amin'ny watchOS 3.0? Amin'ity lahatsoratra ity dia azonao atao ny misintona sary mihetsika isan-karazany mifototra amin'ilay fampiharana Apple vaovao.
Apple Mankalaza ny Paride Pride miaraka amin'ny Rainbow Apple Watch Straps ho an'ny mpiasa
Indray mandeha indray, nankalaza ny Pride Parade i Apple ary tamin'ity indray mitoraka ity dia nanome tadin-avana ho an'ny Apple Watch ho an'ny mpiasany.
Maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra ny Runtastic Road Bike Pro
Runtastic dia manararaotra ny fahatongavan'ny fahavaratra hametrahana ny fangatahana Road Bike Pro maimaim-poana, izay misy vidiny 4,99 euro mahazatra
Ireo zavamaniry tany am-boalohany vs. Nanjavona tao amin'ny App Store i Zombies
Ireo zavamaniry tany am-boalohany vs. Nanjavona tao amin'ny App Store i Zombies! Inona no ho anton'ity hetsika ity? Midira ary fantaro ny zava-drehetra.
Apple dia mamorona tontonana micro-LED mahomby kokoa ho an'ny Apple Watch 2017
Araka ny tsaho farany, Apple dia mamorona tontonana micro-LED mahomby kokoa amin'ny angovo ho an'ny Apple Watch ho avy.
Mitsambikina amin'ny fizotran'ny streaming video ihany koa ny YouTube
YouTube dia mikasa ny hanampy fampielezam-peo mivantana amin'ny fampiharana YouTube, toa izay atolotry ny Periscope sy Facebook Live.
Apple Music dia ho tonga any Korea Atsimo atsy ho atsy
Na dia toa hafahafa aza izany dia mbola misy firenena izay tsy misy ny serivisy mozika mivantana an'i Apple, toa an'i Korea atsimo.
Apple dia manaparitaka hevitra vaovao an'ny Apple Pencil miaraka amin'ny sensor sensor
Apple dia nametraka patanty roa izay afaka manome topy maso antsika amin'ny hoavin'ny Apple Pencil. Ny stylus vaovao dia hampiana sensor sensor
Hanokatra Apple Store fahadimy i Hong Kong amin'ny 30 Jona
Ny 30 jona dia hanokatra ny magazay laharana 484 any Hong Kong ry zalahy avy any Cupertino any Hong Kong, fahadimy ao amin'ny firenena.
WhatsApp dia miasa amin'ny famoronana vondrona ho an'ny daholobe, emoji lehibe kokoa, ary fizarana mozika
Ny WhatsApp beta vaovao dia ahafahan'ny mpampiasa mizara mozika, mamorona vondrona ho an'ny daholobe ary mampiseho ny emoji lehibe indrindra.
Ahoana ny fametrahana Kodi amin'ny iPhone sy Apple TV 4
Te-hametraka Kodi amin'ny iPhone na Apple TV ve ianao ary tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana? Amin'ity lahatsoratra ity dia manazava azy aminao amin'ny volo sy famantarana izahay.
Denver, Colorado, dia efa manolotra fampahalalana momba ny zotram-pitateram-bahoaka ao amin'ny Apple Maps
Ny tanàna farany namoaka vaovao momba ny fitateram-bahoaka amin'ny alàlan'ny Apple Maps dia i Denver any Colorado
Apple dia namoaka ny beta fahatelo an'ny OS X 10.11.6 sy tvOS 9.2.2
Fotoana fohy taorian'ny nanombohan'ny beta fahatelo an'ny iOS 9.3.3, Apple dia namoaka ny beta fahatelo amin'ny tvOS 9.2.2 sy OS X 10.11.6 ihany koa.
Alto's Adventure amidy mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao mahafinaritra Alto's Adventure dia nampihena ny vidiny hatramin'ny 3,99 euro ka hatramin'ny 0,99 euro, fihenam-bidy lehibe ho an'ity lalao ity.
Afaka nitondra fakantsary ny Apple Watch 2
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny Apple Watch 2 dia milaza indray fa afaka mampiditra fakantsary hanaovana antso an-tsary izy
Nesorin'ny Apple ny fanohanany an'i Donald Trump taorian'ny fanafihana ny orinasa
Ary farany nifindra i Apple ary nanapa-kevitra ny hisintona ny fanohanana rehetra ho an'ny Fifanarahana amin'ny antoko Repoblikana izay natao tao anatin'ny andro vitsivitsy
Elemental Rage maimaimpoana amin'ny fotoana voafetra
Ny lalao asehonay anao anio ary azo sintonina maimaim-poana dia ny Elemental Rage, lalao an-tsehatra izay manana vidiny 4,99 sur matetika
Ahoana ny fametrahana tvOS 10 beta nefa tsy mampifandray azy amin'ny Mac
Te hanandrana ny kinova tvOS 10 beta natolotr'izy ireo tamin'ny WWDC 2016 ve ianao? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana azy haingana sy mora.
National Gallery of Art maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Ny fampiharana izay asehonay aminao anio dia ny National Gallery of Art, izay ahitanay ny ankamaroan'ny sanganasa amin'ny tranombakoka Washington
Apple TV dia afaka mampiasa mpanara-maso lalao amin'ny tvOS 10
Tsy mila mampiasa ny remote control Siri intsony amin'ny Apple TV ianao mba hilalaovana ...
Ny TestFlight dia nohavaozina manampy fanampiana ho an'ny iOS 10
Roa taona lasa izay, Apple dia nividy ny sehatra TestFlight, sehatra iray ahafahan'ny mpamorona mandefa ny fangatahany mankany ...
Facebook Messenger dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana bokotra iray
Vao avy nanavao ilay rindranasa i Messenger tamin'ny fampidirana bokotra Home, izay ahafahantsika miverina haingana amin'ny pejin'ny lozisialy.
Apple hanokatra fivarotana faha-41 ao Shina amin'ny 25 Jona
Afaka andro vitsivitsy dia hosokafan'ny Apple ny magazay laharana 41 amin'ireo 42 kasaina hatao any amin'ny kaontinanta Azia ao anatin'ny 20 volana latsaka
Mickey dia milaza aminao amin'ny feo avo ny fotoana amin'ny watchOS 3
Miaraka amin'ny watchOS 3 Mickey sy Minnie dia milaza aminao ny fotoana amin'ny fanindriana ny dialiny, ary ataon'izy ireo amin'ny tena feony Disney izany.
Nohavaozina ny Twitter amin'ny alàlan'ny fanampiana hitsin-dàlana an'i Periscope
Hatramin'ny nanombohan'ny Twitter ny serivisy streaming Periscope, dia lasa iray amin'ireo fampiharana mahazatra indrindra ...
Raffle Apple Watch izahay, tianao ve izany?
Raffle 42-millimeter Apple Watch Sport maimaimpoana tanteraka izahay. Te handresy azy ve ianao? Ampidiro ary fantaro ny fomba hahazoana ny Apple Watch.
Ny Apple Watch 2 dia hamely ny tsena amin'ny faran'ny taona
Ny tarehimarika fandefasana Apple Watch farany dia milaza fa mandefa fitaovana roa tapitrisa isam-bolana ny orinasa hamidy.
watchOS 3, hanome marika vaovao ny Apple Watch anao ianao
tonga ny WatchOS 3 hamaha ny olana maro ananan'ny Apple Watch hatramin'ny nanombohany. Manazava ny vaovao rehetra izahay.
Raffle a Apple Watch. Te handresy azy ve ianao?
Te handrombaka Apple Watch ve ianao? Soa ihany ianao, satria manomboka androany ny antsa ho an'ny Apple Watch ...
Telegram dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana sary-in-sary
Ny fanavaozana Telegram vaovao dia manome antsika ny asan'ny Sary-anaty-tsary ao amin'ny horonan-tsary YouTube sy Vimeo, farafaharatsiny izao.
Apple Pay amin'ny tranonkala, ny rafitra fandoavam-bola Apple izay hifaninana amin'ny PayPal; efa misy amin'ireo tranokala 30 ireo
Ny rafitry ny fandoavam-bola amin'ny finday an'i Apple dia hifaninana amin'ny PayPal miaraka amin'ny Apple Pay amin'ny tranonkala, rafitra iray azo antoka kokoa no mitaky antsika hampiasa Touch ID.
Efa manana mpandresy amin'ny Apple Design Awards 2016 isika
Taorian'ny fihetsem-po fa ny teny fototra nanoratan'i Apple ny vaovao rehetra dia ...
Ity ny fehezanteny WWDC2 adiny 16 ao anatin'ny 7 minitra
Tsy nanam-potoana hahitana ny keynote WWDC16? Aza matahotra, raha tsy hitanao ny hetsika 2 ora dia ity no zavatra tena mahaliana ao anatin'ny 7 minitra.
Ao amin'ny tvOS 10, Apple dia tsy hitaky lalao intsony hifanaraka amin'ny Siri Remote
Manomboka amin'ny andiany manaraka amin'ny tvOS, izay ho tvOS 10, Apple dia tsy hanery ny lalao hifanaraka amin'ny Siri Remote. Vaovao tsara!
Apple dia mamoaka Xcode 8 ho an'ny iOS 10, MacOS Sierra, sy maro hafa
Apple dia namoaka Xcode 8 rehetra ao anaty fonosana iray ho an'ny mpandrindra ankehitriny, mifanaraka amin'ny iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ary Apple TV io.
Apple dia manao azy ofisialy: Craig Federighi dia manolotra ny macOS Sierra
Araka ny efa novakiantsika tamin'ny tranga samihafa dia nantsoin'ny Apple ho solosaina ny rafitra fiasany ary hantsoina hoe macOS izy izao.
tvOS 10, ny rafitra fiasa vaovao an'ny Apple TV dia aseho ao amin'ny WWDC
Apple dia nanolotra izay ho kinova manaraka amin'ny rafitra fiasa Apple TV an'ny taranaka fahefatra. Hantsoina hoe tvOS ary efa amin'ny beta izy.
watchOS 3.0, Apple dia mampiditra ny rafitra fiasa fahatelo ho an'ny Apple Watch afaka 18 volana
Nanantena izany izahay, saingy any Cupertino dia tsy mandany fotoana izy ireo: Apple dia nanolotra ny watchOS 3.0, ny rafitra fiasa fahatelo ho an'ny Apple Watch ao anatin'ny 18 volana.
Noteren'ny Facebook ny mpampiasa hametraka ny app Moments hanindriana sary
Hiverina amin'ny fomba taloha ny Facebook ary manery ireo mpampiasa hametraka ny rindranasa Moments raha te hitandrina ny sarin'izy ireo.
Apple Pay ho an'ny pejin-tranonkala dia mety ho tonga aorian'ny WWDC
Amin'izao fotoana izao, afaka mandoa amin'ny Apple Pay any amin'ny magazay ara-batana sasany izahay, saingy misy tsaho milaza fa tsy ho ela isika dia afaka mampiasa azy io amin'ny pejin-tranonkala.
Ny lalao Toca Life: kilalao ho an'ny ankizy maimaim-poana
Ny mpandrindra Toca Boca dia manome antsika ny lalao Toca Life: Sekoly maimaim-poana, lalao ho an'ny ankizy 6 ka hatramin'ny 8 taona.
Manana fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka ao amin'ny Apple Maps i Atlanta sy Miami
Ny orinasan-tserasera Cupertino dia nanampy fotsiny ny fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka any Miami sy Atlanta.
CiderTV, fehezo ny Apple TV avy amin'ny Notification Center
Te-hifehy ny Apple TV an'ny taranaka fahefatra avy amin'ny Notification Center an'ny iPhone-nao ve ianao? Eny, ilay tadiavinao dia antsoina hoe CiderTV.
Mampiasa ny fanamiana ofisialy Apple Store ny mpangalatra handroba ireo fivarotana
Ny loko manga an'ny fanamiana an'ny mpiasan'ny Apple Store dia toa iray amin'ireo antony nahatonga ny halatra tao amin'ny Apple Store any New York
Ny lalao izay asehonay anao anio ho ampidininao maimaimpoana dia ny Toc Life: School, lalao ho an'ireo ankizy kely ao an-trano.
Apple dia afaka mampiditra iMessage ho an'ny Android amin'ny WWDC
Ahoana raha misy iMessage ho an'ny Android? Eny, mety ho tena izy tsy ho ela io, manomboka amin'ny WWDC.
Raha ny voalazan'i Wozniak dia ny App Store no noforonin'i Apple tsara indrindra
Tsy ny iPhone, tsy ny iPod, na ny Apple 2. Ho an'i Steve Wozniak, ny forona tsara indrindra nataon'i Apple dia ny App Store sy ireo rindranasa natolony.
Ny App Store dia hahazo fanovana lehibe amin'ny asany
Tsy ho ela isika dia afaka mankafy ireo fiasa vaovao izay hapetrak'i Apple ao amin'ny App Store, ny sasany amin'izy ireo dia natao ho an'ny mpamorona.
iTunes hahazoana fanovana lehibe amin'ny WWDC, hoy i Gurman
Izahay rehetra dia mihevitra fotsiny fa hiova tsy ho ela ny rindranasan'i Apple mozika, saingy tsy noeritreretinay hoe ho tonga miaraka amin'ny fanovana lehibe i iTunes.
Ny tadin'ny Apple Watch vaovao an'ny coach dia hiakatra amin'ny tsena amin'ny 12 Jona
Amin'ny faha 12, Coach dia handefa ny tadiny vaovao ho an'ny Apple Watch, miaraka amin'ny kinova sy loko telo samihafa.
Apple Pay dia mahatratra banky sy carte de crédit 30 fanampiny any Etazonia
Mbola miandry azy any Espana isika, fa any Etazonia kosa dia manohy manitatra ny fisiany. Apple Pay dia mahatratra 30 ireo andrim-panjakana ara-bola any Etazonia.
Apple Pay dia ho tonga any Suisse amin'ny 13 Jona
Amin'ny 13 Jona, daty hanombohan'ny WWDC, Apple Pay dia ho tonga amin'ny firenena vaovao koa: Suisse
13, hevitra MacBook Pro miaraka amin'ny fampisehoana OLED ho an'ny endri-javatra azo ovaina
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia niresaka tsaho momba ny fitaovana hafa iray izay ataon'i Apple koa izahay ary azo havaozina ...
Nanampy ny safidy farany hizara amin'ny roul ny Instagram
Ny fampiharana Instagram dia vao nohavaozina nanampy fanitarana vaovao hizarana ny sary na horonan-tsary tianao indrindra avy amin'ny roul
Ny tobin'ny AirPort dia miverina any amin'ny Apple Apple Store
Tamin'ny herinandro lasa teo, Apple nanararaotra nanangana fanavaozana firmware izay andrasan'ny mpampiasa maro ho an'ny toby rehetra ...
Famintinana isan-kerinandro vaovao izay ampisehoanay aminao ny vaovao mifandraika indrindra momba ny iPhone manokana sy ny tontolon'ny Apple amin'ny ankapobeny
Apple dia tsy handefa Thunderbolt Displays vaovao miaraka amin'ny GPU tafiditra
Ary farany, ny orinasa miorina amin'ny Cupertino dia tsy handefa Thunderbolt Displays vaovao misy vahaolana 5k sy GPU tafiditra
Samsung Pay ihany no maharesy mpampiasa 6.000 ao anatin'ny 12 ora any Espana
Ny serivisy fandoavam-bola amin'ny finday Samsung dia efa eto amintsika, saingy ny fomba fahatongavany dia mamela ireo mpampiasa maro hivoaka.
Apple mandefa ny fampielezan-kevitra Back to School 2016 amin'ny Beats maimaim-poana
Ny ankizilahy Cupertino dia mandefa ny fampielezan-kevitra Back to School amin'ny alàlan'ny fanomezana an-telefaona Beats ho an'ny fividianana iPhone, iPad, na Mac.
Tonga amin'ny kinova 12.4.1 ny iTunes amin'ny famahana olana maro
Fotoana fohy taorian'ny andiany 12.4, Apple dia namoaka iTunes 12.4.1 manamboatra olana maro. Lazainay aminao ny vaovao rehetra.
Tsy miasa intsony ny fampiharana Instagram an'ny antoko fahatelo
Instagram dia nanova ny fampiasana ny API ho an'ny mpamorona antoko fahatelo, ary tsy niasa intsony ny rindranasa rehetra
Apple Pay dia kely ny fananganana azy any ivelan'i Etazonia
Ny fanitarana iraisam-pirenena an'i Apple Pay dia miadana kokoa noho ny nandrasana. Ankoatr'izay, misy olana ara-teknika isan-karazany miantraika amin'ny fananganana azy.
Apple dia namoaka ny topi-maso voalohany amin'ny Swift 3.0 mialoha ny WWDC16
Miomana amin'ny WWDC16, Apple dia namoaka ny Preview of Swift 3.0 voalohany, ilay fiteny fandaharana nampidiriny androany roa taona lasa izay.
Sky Force Reloaded fiaramanidina vaovao hitifitra
Sky Force Reloaded dia lalao fiaramanidina vaovao izay tonga tao amin'ny App Store miaraka amin'ny compas ao anaty app ary misintona maimaim-poana.
Sago Mini Road Trip maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ho fampiharana mandritra ny herinandro
Amin'ity herinandro ity Apple dia manolotra antsika amin'ny fampiharana ny herinandro fangatahana ho an'ny ankizy antsoina hoe Sago Mini Road Trip. Araraoty izao fa afaka izany.
Amazon dia mila fifanarahana ara-drariny hamidy indray amin'ny Apple TV
Efa amam-bolana maro izay no nijanonan'i Amazon ny fivarotana ny Apple TV sy ny Google Chromecast tamin'ny tsy fampidirana azy ireo ho an'ny Prime Video ao anaty boaty misy azy.
Facebook Messenger dia hanisy fanononam-bidy
Nandritra ny fotoana fohy izao, indrindra taorian'ny fanambarana ireo taratasin'i Snowden, fiarovana ary ...
Apple Nanisy Playlists "mamaky" vaovao amin'ny Genres Popular amin'ny Apple Music
Apple dia manampy lisitra "mamaky" vaovao amin'ny Apple Music, amin'izay azo raisina ho iray amin'ireo fanovana andrasana amin'ny volana manaraka.
Apple voampanga ho nandika ny patanty Wi-Fi nataon'i CalTech
Taorian'ny fanombohan'ny iPhone voalohany dia nametraka ny milina ara-dalàna i Apple mba hisorohana ny orinasa tsy hanao ...
Ahoana ny fomba hijerena ireo tsingerin'ny bateria amin'ny iPhone
Battery Percentage dia fampiharana misy ao amin'ny App Store izay ahafahantsika manamarina ny satan'ny batterie iPhone
Ny miasa ao amin'ny Apple Store dia tsy tsara tarehy toa azy
Mpiasa taloha tao amin'ny Apple Apple Store no nanao tafatafa nilaza fa tsy ny zava-drehetra dia tsara tarehy toy ny nopetahany loko Apple Stores
Maimaimpoana ny AirAttack 2 mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao asehonay anao anio ary azo sintomina maimaimpoana dia ny Arirattack 2, lalao sambo mahavariana
Google dia manavao ny fampiharana azy ary manampy ny fanohanana ny AMP
Google dia vao avy nanavao ny fampiharana ampiany fanohanana ny haitao haingam-pandeha amin'ny pejy AMP